Forms fananganana miaraka amin'ny FormS spring | Martech Zone
Fomba fananganana miaraka amin'ny FormS spring
Alakamisy, Aogositra 2, 2007 Alakamisy, Septambra 19, 2013
Ny lahatsoratra androany dia avy amin'ny namana sy Blogger vahiny, Ade Olonoh:
Raha manao asa an-tserasera ianao, dia mety nitady fitaovana hanampy anao hanangana endrika an-tserasera. Raha mpitoraka bilaogy ianao dia angamba satria mitady zavatra mandroso kokoa noho izay azonao avy amin'ny endrika fanehoan-kevitra mahazatra ianao.
Raha mpivarotra ianao, dia mety ho hitanao fa manahirana ny manangana takelaka hanangonana ny firaketana amin'ny fifaninanana, na sahirana ianao manandrana mahazo karazana sanda avy amin'ireo mailaka an-jatony na an'arivony ao amin'ny boaty mailakao tonga vokatry ny fampielezankevitra an-tserasera mahomby. Ekena izany: na dia manam-pahaizana HTML aza ianao dia halanao ny asa mandreraka amin'ny fananganana endrika.
Te hampahafantatra anao aho FormS spring, fitaovana tsara ahafahan'ny mpampiasa manana ambaratonga fahaiza-manao manangana endrika an-tserasera mora foana, ary manampy anao hitantana tsara kokoa ireo fandefasana azonao avy amin'ny mpanjifa. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2006 no nanombohana azy io, saingy namoaka ny kinova 2.0 tamin'ity herinandro ity izay misy fantson-javatra mahafinaritra izay manome lanja akaiky azy.
Ny hatsaran'ny FormSpring dia ny ahafahanao manamboatra endrika fifandraisana an-tserasera, fanadihadiana, na fisoratana anarana ao anatin'ny minitra vitsy monja nefa tsy mampiasa kaody HTML na kaody scripting. Mety ho maivamaivana ianao amin'ny fahafantarana fa mahavita ny tenanao rehetra ianao nefa tsy mila miantso olona avy any IT akory.
Ity misy pikantsary iray amin'ny efijery mpanangana endrika - manamboatra ny endrikao ianao amin'ny fitarihana sy fampidinana ireo saha, ary azonao atao ny mijery mialoha izay ho endrik'ilay endrikao raha ny tena izy:
Rehefa vonona hampiasa ny endrikao ianao dia afaka mandika sy mametaka rohy handefasana amin'ireo mpampiasa anao, na maka andalana kaody HTML azonao ampidirina ao amin'ny bilaoginao na tranokalanao. Ny ampahany lehibe amin'izany dia ny ahafahanao mampifangaro tanteraka ny endrikao ao anatin'ny volavola misy anao, mitazona ny marikao.
Azonao atao ny mijery ny fandefasana hafatra amin'ny alàlan'ny fampandrenesana mailaka na ny fahana RSS. Ary raha vantany vao vonona hikarakara ny valiny ianao dia afaka misintona takelaka Excel misy ny fandefasana, na manafatra izany data izany ao anaty tahiry na rafitra CRM.
Ny zavatra tsara indrindra dia ny ahafahanao mamorona kaonty maimaim-poana izay manome ny ankamaroan'ny fampiasa. Raha mitady fampiasana mavesatra ianao, ny drafitra karama dia manomboka amin'ny $ 5 / volana tsy misy fifanarahana na saram-pandaminana.
Andramo ny demo feno, vakio bebe kokoa momba ny Toetoetra, na misoratra anarana amin'ity kaonty maimaimpoana ity.
Famonoana ahy (bilaogy) moramora
Zavatra valo tsy fantatrao momba ahy
2 Aogositra 2007 à 9:52
3 Aogositra 2007 à 5:47